Maxaa Sababa Khilaafaadka Xisbiyada Siyaasada Ee Dunida Saddexaad?: Cabdilaahi Beershiya | Hohad News
October 2, 2018 - Written by wariye sakariye
Marar badan ayeynu maqalnaa burbur hoose amma kala jab ku dhaca xubnaha uu ka kooban yahay xisbi,
taas oo inagu sababta in aynu si dhab ah u qeexi wayno sababta rasmiga ah ee ka dambeysa kala jabkaasi. Xeer hoosaadka yar ee ku qoran waraaqaha kooban ee xisbi leeyahay ayey dadka qaar dusha ka saaraan inuu sabab u yahay kala jabka axsaabta laakiin sida ay khubarada wax ka qora axsaabta siyaasadeed sheegeen waxa qayb weyn ka ah inuu khilaaf ku yimmaado xisbi nolol maalimeedkiisa rasmiga ah ee uu xisbigu ku sugan yahay.
Qaab dhismeedka shaqo ee joogtada ah ayaa xisbiga ka dhiga mid u nuqul khilaafaadka amma ka saara dhibaatooyinka soo dhex gala, haddii aynu si kale u dhigno waxayaabaha khilaafka xisbiga nuqgleeya amma soo dedejiya waxa ka mid ah: xidhiidhka ka dhexeeya xubnaha xisbiga, wacyiga guud ee qofka ka tirsan xisbiga oo hooseeya, aqoonta xubhana xisbiga, noociyada bulshada uu ka dhex jiro xisbigu iyo xaalada wadanka ee guud. Haddii dhinaca kale laga fiiriyo waxa khilaafadka xisbiyada sababa; taariikhda xisbiyada wadan leeyahay soo mareen tusaale ahaan immisa jeer ayey khilaafaad noocan ah ka dhex dheceen, dadka xisbiyada ku jira laftoodu sida ay u fahansan yihiin noocyada khilaafka iyo xallintooda, iyo waliba natiijaada ka dhalatay khilafaadka taariikheed siddee looga faa’iideystay.